Windows Subsystem Ye Android Windows 11
Iwe Unogona Zvino Kudhawunirodha Android Apps pa Windows 11: Heino Sei
February 16, 2022 by Martin6
Microsoft iri kupedzisira yaburitsa mamwe akawanda maficha e Windows 11, yazvino sisitimu yekushandisa. Chimwe chinhu chinotarisirwa kunge chiri Android apps for PC, uye zvinoita sekunge Microsoft yave kuburitsa kune veruzhinji. Vagari vekuUS vanogona kutanga kuwana iyo Amazon Appstore mukati meMicrosoft Store, kwavanogona kudhawunirodha yavo yavanofarira Android maapplication pamalaptops kana PC yavo. … [Verenga zvakawanda ...] nezve Iwe Unogona Zvino Kudhawunirodha Android Apps pa Windows 11: Heino Sei
Android maapplication ari kuuya ku Windows 11 nhasi, iine anopfuura chiuru mapurogiramu
Mwedzi wapera, Microsoft yakati boka rezvinhu zvitsva zviri kuuya Windows 11, uye nhasi, femu iri kuzivisa kuwanikwa. Nhau huru ndeyekuti Android apps dziripo kune vasiri-Insiders kuti vatange kushandisa mukutarisa nhasi. The Windows Subsystem ye Android iripano Pakaziviswa Microsoft Windows 11 gore rapfuura, yakati Android apps yaizomhanya pane itsva OS. … [Verenga zvakawanda ...] nezve Android apps dziri kuuya Windows 11 nhasi, iine anopfuura chiuru mapurogiramu